Azafady mba lazao amiko ny antony mampinono ahy! | Martech Zone
Azafady mba lazao amiko ny antony mampinono ahy!
Alakamisy, Jona 21, 2007 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Tiako ny tanjona. Tiako indrindra ny tanjona rehefa apetrako ny tenako. Tamin'ny faramparan'ny taon-dasa dia nametraka tanjona ny tenako fa hotapahiko ny marika 5,000 tamin'ny Technorati tamin'ny taona 2007. Ho fanampin'ny sasany tanjona hafa napetrako. Afa-tsy ny fahasalamako (tena mila mampihena ny lanjako aho), noravako ny tanjona rehetra napetrako ho ahy, ankoatry ny laharana Technorati.
Tao anatin'izay herinandro vitsivitsy lasa izay, ny bilaogiko dia toa 'niraikitra' tamin'ny fitomboana. Matetika aho no manoratra an'io rehefa miala amin'ny fahavaratra ny olona. Raha ny 'laharana' anao no tsy mihetsika, na izany aza, izany dia manondro olana hafa satria isika rehetra dia tsy maintsy miaritra ny bla fahavaratra. Herinandro vitsivitsy lasa izay, faly aho nahita ny bilaogiko nihantona teo amin'ny 2,010… lasa 2,125 izao.
Mihemotra ve ny atiny?
Handeha hiresaka lohahevitra ve aho?
Mitroka fotsiny ve aho?
Nandeha lavitra mihitsy aho nividy Adwords ho an'ilay tranonkala. Mifantoka amin'ny bilaogy ataon'ny orinasa sy media sosialy aho, ary koa mividy ara-jeografika ny Adwords ho an'ny Indianapolis. Nahazo fahatsapana 15,000 teo amin'ny doka aho saingy potsitra vitsivitsy monja. Tsy mampaninona ahy izany, be loatra, satria mandoa vola ny potsitra. Ny tanjon'ny dokam-barotra dia ny fanekena anarana fa tsy ny fifamoivoizana ara-batana. Fantatro raha afaka mamoaka ny anarako any amin'ny mpihaino mety aho, hanaraka ny fifamoivoizana. Ampahafantaro ahy raha mahita ny iray amin'ireto doka ireto ianao ary milaza amiko ny hevitrao momba azy.
Tiako koa ny maheno izay tsy hitanao momba ny bilaogiko izay niavaka talohan'izay fa tsy tato ho ato. Raha saro-kenatra ianao ary tsy te-haneho hevitra imasom-bahoaka dia aza misalasala mampiasa ny pejin'ny fifandraisako. Ny 'laza sy ny harenako' dia toa avy amin'ny WordPress Plugins indrindra fa tsy ny atiny hafa ao amin'ilay tranonkala. Somary manahirana kely izany satria manao fikarohana kely momba ny lohahevitra isan'andro aho.
Mazava ho azy, raha te-hanampy be amin'ny atiny sy ny laharana Technorati aho dia manorata momba ny bilaogiko sy ny fomba mahamety azy amin'ny bilaoginao Mampanantena aho fa hisokatra amin'ny fitsikerana aho ary manantena ny fampiharana fanovana faran'izay haingana.
Raiso io iPhone io!
Formula Marketing amin'ny mailaka sy mari-pamantarana lehibe
Jun 21, 2007 ao amin'ny 10: 41 PM
Ka, Doug, raha vao tafiditra ao amin'ny top 5 an'ny Technorati ianao, inona ny fanatontoloana? 🙂
Ary eto no nieritreretako ho tanjona tsara ny 10,000 ambony 🙁
22 Jun 2007 amin'ny 6:41 AM
Top 5 no tena nanao ny androko! Ny 10,000 XNUMX ambony dia azo antoka fa tokony hireharehana. Tena tsy dia miraharaha ny isa marina aho - vao mihatsara izany. Tato ho ato dia nihemotra izy ka miahiahy aho.
Samy hiala eo foana izahay! Tsy isalasalana fa ho mihoatra ahy ianao tsy ho ela!
engtech @ kasety fantsona internet
Jun 21, 2007 ao amin'ny 10: 21 PM
Mety nahatratra ny sakana enim-bolana ianao.
Technorati dia manisa rohy fotsiny tao anatin'ny enim-bolana lasa izay, noho izany dia mba hitombo hatrany ny laharanao dia tokony hihoatra ny tahan'ny rohy azonao enim-bolana lasa izay.
Hitako fa niadana be ny raharaha teo anelanelan'ny taona 1900-2100… dia lasa haingana be ny 1450-1900.
Avy eo narary tamin'iny rehetra aho 🙂
22 Jun 2007 amin'ny 6:46 AM
Heveriko fa marina ianao Eng! Hotohizako izany. Ny statistiko ankapobeny (ao anatin'izany ny hits) dia somary fisaka ihany koa. Namaky tamin'ny tranonkala toy izany aho Problogger izany hoe manampy lahatsoratra hafa fotsiny dia mety hanisy tsy fitoviana.
Halako ny manoratra lahatsoratra fotsiny ho an'ny lahatsoratra iray. Fantatro fa tsy nanoro hevitra an'io izy, saingy mety izany no izy. Te hieritreritra aho fa manampy sanda izay tsy ho hitan'ny olona any an-kafa. Izaho dia mitady ny tsy manam-paharoa foana… zavatra sarotra hita!
Jun 25, 2007 ao amin'ny 4: 58 PM
Toa efa nahazo ny manga blues!
Ekeko fa ny fitazonana an'i Technorati 6 volana angamba no tompon'antoka amin'izany.
22 Jun 2007 amin'ny 2:30 AM
Heveriko fa manome fifangaroana lahatsoratra tsara ianao ary nanao tsara tokoa ianao mba hihoarana ireo tanjona napetrakao. Tsy hiala eo fotsiny aho.
Bilaogy marobe no mamely ny faritra tsy misy hetsika firy. Fantatro izany ao amin'ny bilaogiko. Ny isan'ny mpanjifako dia nitombo avo roa heny tao anatin'ny 6 volana lasa, saingy ny fifamoivoizana tato ho ato dia nijanona ho tsy miova, ary ny laharana Technorati dia miraikitra manodidina ny marika 100K. Saingy tsy mampihena ny hafanam-poko amin'ny fanaovana bilaogy izany.
Tena tiako ny mamoaka lahatsoratra sy manoratra lahatsoratra ary tsy hiala eo intsony aho. Miezaka ny tsy hifantoka be loatra amin'ny statistiko aho androany fa tsara ny mametraka tanjona toa ny nataonao.
Nahita mpitoraka bilaogy sasany aho nahita fahombiazana mahatalanjona tao anatin'ny volana vitsivitsy taorian'ny nanombohany bilaogy ary tsara ny mahita izany, fa ho an'ny ankamaroantsika, mila ezaka be izany mandritra ny taona maro vao hahita izay tena fiverenana.
Ny torohevitro dia ny manoratra bilaogy hatrany. Raha tianao ny manao an'izany dia aza mijanona.
22 Jun 2007 amin'ny 6:43 AM
Tena tiako ny mitoraka bilaogy, Itch! Tsy misy ny fijanonako tsy ho ela. Te hanana antoka fotsiny aho fa mbola mizara fampahalalana sarobidy amin'ny olona!
Hanohy ny fantsorinay hatrany izahay!
22 Jun 2007 amin'ny 7:09 AM
Tsy minono ianao! Nahamarika aho fa ny fivezivezena, ny rohy miditra, ary ny mpamandrika vaovao dia mihetsiketsika. Mamokatra atiny sarobidy ianao izay hanohy hisarika ny saina. Miloka aho afaka telo herinandro dia manontany tena ianao hoe maninona ianao no nanoratra an'ity lahatsoratra ity!
22 Jun 2007 amin'ny 8:18 AM
Misaotra, Pat! Toa tsy natoky tena aho. Ianareo olona mivadika ho vondrona mpanohana be!
Ary koa, tsikaritro fa mahatratra ny # 41 ao amin'ny bilaogy Todd And's Power 150 Marketing aho. Oay! Nitsambikina kely aho teo!
Jun 22, 2007 ao amin'ny 2: 13 PM
Mety ho lasa aloha loatra ny sentoiko! Nijery aho ary mamerina sanda hafa ny API ho an'ny laharam-poko noho ny tranokala! Hita fa nahavita 2,000 aho! Narotsako tao Technorati ireo olona tsara mba hampahafantatra azy ireo fa misy zavatra tsy mety.
Jun 22, 2007 ao amin'ny 6: 21 PM
Salama Doug, ary eny mbola velona aho. Tsy dia lanjaiko loatra ny statut mitongilana toa ny tian'ny Technorati manompo. Ny statistikan'izy ireo dia mora ampiasaina ary tsy dia misy dikany amin'ny tontolo tena izy. Hifantoka amin'ny tena antontan'isa anao amin'izay counter ampiasainao aho. Tohizo foana ny fanoratana atiny tsara tsy tapaka ary hiditra ny ROI.
Fanamarihana iray monja. Tsapako fa mitady ny fifamoivoizana ataon'ny orinasa ianao, saingy mety te hieritreritra ny hanazava kely ny sarinao ianao. Ho hitanao fa ny an'i Seth Godin, Steve Rubels (ary ny Bloke Blokes 🙂 dia nandeha nanolotra sary tso-po kokoa. Nefa indray, efa somary antitra izy ireo ary efa nahatratra ambaratonga iray teo amin'ny tontolon'ny orinasa. Ka fiantsoana fitsarana izany ary zavatra mety hoheverinao ho andrana.
Tahaka ny nolazain'i Itch, ny sasany mahatratra ny tampony haingana. Saingy matetika izy ireo dia mpanararaotra nahavita nilalao ny rafitra, na nifandray tamina liste a izay nanampy azy ireo teny an-dalana. Fa ho antsika sisa manao azy amin'ny fomba marina dia mitaky fotoana sy ezaka be izany.
Tohizo hatrany bro.
Jun 25, 2007 ao amin'ny 5: 33 PM
Misaotra, Bloke! Torohevitra mahafinaritra izany! Tena vitsy ny safidiko tsara, fa tena hijery sary kely tsy dia feno aho!
Faly be ianao fa tsara ny soa vitanao!
Jun 26, 2007 ao amin'ny 5: 58 PM
Ary tadidio fa isaky ny manampy bilaogy vaovao ao anaty lisitra ianao. Na dia mety hihena kely aza ny laharam-pahamehanao dia mbola ianao ihany no ambony x%
Ary avy eo dia tsy maintsy dinihinao hoe iza ny olona kendrenao. Ny bilaogy iray izay misy atiny tsy dia manam-pahaizana manokana dia hanana fotoana tsara kokoa ahazoana mpihaino marobe. Raha atao teny hafa, dia manisa tokoa ny toerana misy ny naotinao raha ampitahaina amin'ny bilaogy sy tranonkala hafa momba ny marketing sy ny teknolojia.
Ho tahiry farany, azonao ampiasaina foana lohateny misy referansa amin'ny faritra misy ny vehivavy;)
Tohizo fa tsara ary tohizo ny tsiky.